Man City inongopfuura Liverpool - KDB - TELES RELAY
HOME » SPORTS Mune Man City ari nani kupfuura Liverpool - KDB
Mune Man City ari nani kupfuura Liverpool - KDB
Kevin De Bruyne Akati haaiti tsitsi kune Liverpool mushure mekunge Manchester City ichivarova ivo kuChirungu cheMugovera weChikwata nechechi chimwechete sezvo ivo vaive vatambi vakanakisisa pakupedzisira.
Liverpool yakarasikirwa nemutambo mumwe chete wenguva yacho. kuti apedzisire pa 97 points - yepamusoro-soro yakakonyorerwa kumunhu wokupedzisira uye chimiro chaizodai chakakwanira kuti chikwanise chikamu chacho munenge nguva mitatu ye Premier League.
Asi vakakotamira kuguta mushure me14 Kukunda kunopedzisa kupedza nguva uye De Bruyne inoti zvinoratidza kuti vakanaka kupfuura boka raJurgen Klopp.
"Iko kushanda kunoshamisa [kubva kuLiverpool] asi izvo zvinoreva kuti taive nani kupfuura ivo pakupedzisira," akadaro De Bruyne. akaudza vatori venhau. "Handinzwi tsitsi kwavari, nokuti handifungi kuti ivo vachavawo.
"Handifungi kuti pane munhu ainetseka pamusoro pemafambiro atakabva muChampions League. Iwe unotora iyo. Ndinoziva manzwiro avanoita nokuti iwe uchanetseka. Tingazonzwa zvakafanana kana zvakaitika kwatiri. Asi isu tichiri kukwikwidzana. Tinoda kukunda zvakawanda sezvavanowana, asi ini ndinogona kunzwisisa manzwiro avo.
- Ndeipi iyo FA Cup Finals ichaitika?
- Ndiani anokodzera kuti mutungamiriri wenyika muEurope League
"Aya ndiwo maonero evatambi. Iwe unonzwira tsitsi kune mamwe mapoka, asi pakupedzisira, chinhu chakakosha ndechekuti kana iwe uchitamba mutambo mumwe nomumwe, iwe pachako, uye kana iri boka rako. iri boka rako. Hondo yacho yakanga yakakura. Asi kunzwa "urombo" kwavari kungave kuri kuenda zvishoma. "
Mukuru weguta, Pep Guardiola, akatsanangura kubuda kwavo se "utsinye" pashure Raheem Sterling kupikisana neTottenham yakadzingwa ichichitevera mutsara wevhidhiyo mutevedzeri mukuru
. Mugovera ( kurarama paESPN + masikati ET ) mushure mokunge vatorawo nguva yeCarabao Cup.
Sterling yakakurira makiromita mashomanana kubva kuWembley uye yakatsvaga kukunda medali yake yekutanga yePo Cup.
"Kuva mukupedzisira kune guru uye vanhu vangati ndeimwe imwe kapu, asi kwatiri, kuva mukupedzisira kune guru," akadaro Sterling. "Tanga tichiedza kwemakore akawanda ikozvino, uye hatina kukwanisa kuzviita uye gore rino tiripo.
"Tinofanira kunge tine chivimbo uye tinoedza kukunda. Iyo nyanzvi yakanaka uye inotamba ini handina kumbobvira ndaibata uye nerunyararo, ndinogona kukwira masitepisi uye ndinoisa maoko angu pamusoro pavo.
"Tine nzira yakareba yekuenda uye tinoziva kuti ichaoma sei. kurwisana neboka rakaoma chaizvo rinobva kuWatford, asi iri dambudziko ratinosangana naro. "
Panguva iyi, Guardiola akati aida Leroy Sane kugara muManchester City asi unotaura kuti wenzi weGermany, uyo anotanga kushanda
Bayern Munich yakabatanidzwa nekutengeswa kwezhizha kweSane, 23, uyo achiri nemakore maviri pachibvumirano chake chiripo.
Sources inotaurirwa ESPN FC kuti Sane akanga ava kuda kuisa chibvumirano chitsva muna March, asi achangotanga mitambo mitatu yeLigan League kubva ipapo, kunyange zvazvo Guardiola achiomerera kuti anoda kuti igare uye iri kurwira nzvimbo yekutanga.
"Tanga tave nemakore nehafu tichiedza kusaina chibvumirano chake, tinochida," Guardiola akaudza hurukuro yepepanhau muFIFA Cup yekupedzisira pamusoro pe Watford.
"Kana uchida kuwedzera chikamu [mumwe munhu] ndizvo zvaunoda. Iwe hausi kuzoendesa chibvumirano chako nokuti haufariri.
"[Haasi kutamba] nokuti ari kukwikwidzana naRaheem Sterling uye Bernardo Silva . Hazvisi nyore. Kana iwe uchida kutamba muLoyoy, Sterling, Riyadh [Mahrez] Bernardo hatigoni kukwikwidzana ne quad ine mapaviri maviri chete.
"Vanofanira kurwisana uye kutamba zvakanyanya sezvinobvira kuti vandigutsikane kuti ndivashandise. "
Asi chibvumirano chakasara chisina kutaurwa, Guardiola akaramba kuratidza kuti Sane aizoramba achiri muchikwata chekuzotevera.
Vincent Kompany Nguva yemberi inonyanya kusanyatsojeka nekonesheni yemukuru weguta iyo inopera pakuguma kwemwaka.
Ikokupedzisira ye FA Cup musi weMugovera paWembley inogona kuva pakupedzisira pakuonekwa kwechikwata mushure memazana emakore 11 uye kuonekwa kwe359 kwechikwata.  "Handitarisiri," akadaro Guardiola kumubvunzo kana uyu angave ari wokupedzisira. "Takataura naV Inny uye isu tichataura mushure mokunge mutambo uyu. Asi mazwi angu haabatsiri pane zvaakaita mumavhiki apfuura uye nokuda kwebasa rake.
"Vinny akaratidza zvakare apo akanga akakodzera zvaaikwanisa kuita. Ndiyo yakanakisisa. Dambudziko ndiro nguva kubva munaNovember kusvika munaFebruary neMarch. Takarasika kakawanda nekuda kwechikonzero ichi. Paanenge akafanana, anoshamisa. "
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/manchester-city/story/3855963/man-city-just-better-at-end-than-liverpool-kdb
Ibrahimovic anorambidza mutsara waJohnson
Champions League: Messi, mutungamiri wenyika ari kure - VIDEO